Biden iyo Modi oo wada hadal yeeshay | Star FM
Home Caalamka Biden iyo Modi oo wada hadal yeeshay
Biden iyo Modi oo wada hadal yeeshay
Madaxweynaha Maraykanka Joe Biden iyo ra’iisul wasaaraha dalka India Narendra Modi ayaa ka wada hadlay arrimaha isbeddelka ku yimaado cimillada.
Labadan mas’uul ayaa sidoo kale ku heshiiyay in la sii xoojiyo cilaaqaadka ka dhexeya dalalkooda ee ku dhisan mabaadi’ida dimuqraadiyadeed.
Madaxdan oo khadka taleefoonka ku wada xiriiray ayaa sidoo kale sheegay in ay ka go’an tahay inay ka wada shaqeyaan la dagaalanka cudurka COVID-19, argagixisada iyo dib u nooleynta dhaqaalaha caalamka.
Xafiiska ra’iisul wasaaraha India ayaa soo dhaweeyay in Biden uu niyad u hayo la tacaalidda saameynta isbeddelka ku yimaado cimillada iyo dib ugu biiridda heshiiskii Paris ee uu Donald Trump ka baxay sanadkii 2017-kii.
Previous articleNin xaaskiisa afar sano ka hor gacanta ka jaray oo 30 sano xabsi lagu xukumay
Next articleDHAGEYSO:In ka badan 200 oo ah haweenka Guriceel oo laga burburiyay meelo ay ku ganacsanayeen
Ciidamada booliska ee dalka Australia ayaa xabsiga dhigay ku dhawaad 270 qof ka dib dibadbaxyo dhacay. 235 oo dadkan ka mid ah ayaa lagu qabtay...
Dowlada Australia ayaa gaashaanka u daruurtay inay burisay heshiiskii maraakiibta quusta biyaha ee Faransiiska. Waxay sheegtay inay xukuumadda Paris u muujisay walwal ay bilooyin ka...